Zazivlju - Croata - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: zazivlju (Croata - Birmanês)
Izlij gnjev na pogane koji te ne priznaju i na kraljevstva to ne zazivlju ime tvoje!
ကိုယ်တော်ကို မသိသောတပါး အမျိုးသားတို့ အပေါ်သို့၎င်း၊ နာမတော်ကို ပဌနာမပြုသော တိုင်းနိုင်ငံ သားတို့အပေါ်သို့၎င်း၊ အမျက်တော်ကို သွန်းလောင်း တော်မူပါ။
Samrtnici hropæu iz gradova, ranjenici u pomoæ zazivlju. Al' na sve to Bog se ogluuje.
လူတို့သည်မြို့ထဲမှာ ညည်းတွားကြ၏။ နာသောသူတို့သည် အော်ဟစ်ကြ၏။ နာသောသူတို့သည် အော်ဟစ်ကြ၏။ သို့သော်လည်း သူတို့ဆုတောင်းသော စကားကိုဘုရားသခင်သည် ပမာဏပြုတော်မမူ။
Neæe li se urazumiti svi to bezakonje èine, koji prodiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino:
မုန့်ကိုစားသကဲ့သို့ ငါ၏လူတို့ကို ကိုက်စား၍၊ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာမပြုသော အဓမ္မလူအပေါင်းတို့ သည် မသိဘဲ နေရကြသလော။
Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeæu, da glasno Boga zazivlju i da se obrati svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je èinio.
လူသတ္တဝါတိရစ္ဆာန်တို့သည် လျှော်တေအဝတ် ကို ဝတ်ကြစေ။ ကြိုးစား၍ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းကြ စေ။ အသီးအသီးတို့သည် မိမိတို့လိုက်သော အဓမ္မလမ်း၊ မိမိတို့ပြုသော အဓမ္မအမှုကို ရှောင်ကြစေ။
Izlij gnjev na narode koji te ne priznaju i na plemena koja ne zazivlju imena tvoga! Jer oni su prodrli Jakova, izjeli ga, opustoili naselje njegovo.
ကိုယ်တော်ကိုမသိသော တပါးအမျိုးသားတို့ အပေါ်သို့၎င်း၊ နာမတော်ကို ပဌနာမပြုသော အမျိုး အနွယ်တို့အပေါ်သို့၎င်း အမျက်တော်ကို သွန်းလောင်း တော်မူပါ။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ယာကုပ်အမျိုး ကို အကုန်အစင်ကိုက်စား၍၊ သူ၏နေရာကို သုတ်သင် ပယ်ရှားကြပါပြီ။
διυδροξυανθρακινόνη (Grego>Alemão)hatáskörmegosztása (Húngaro>Inglês)mere father ki death ho gai (Hindi>Inglês)naraženina (Tcheco>Alemão)slogan tungkol sa kulturang pilipino (Tagalo>Inglês)ship sharot (Albanês>Italiano)laila tov (Hebraico>Inglês)glucose (Inglês>Tcheco)io piacioate (Italiano>Português)ma amit (Japonês>Inglês)kitni pyari hai (Hindi>Inglês)jälkeläisissä (Finlandês>Português)sürülenlerden (Turco>Árabe)ferrivia metropolitana (Latim>Francês)meaning sim card in kannada (Inglês>Kannada)policloreto de vinila (Português>Inglês)exekutorský úřad (Tcheco>Russo)faithful and truthful (Inglês>Latim)i di remote control (Inglês>Japonês)nhiếc (Vietnamita>Indonésio)subsecretario (Espanhol>Holandês)vestae (Latim>Italiano)como se escribe antojitos en quechua (Espanhol>Quechua)winners (Inglês>Grego)